Bakhala ngamatoho eBhobhoyi | News24
Bakhala ngamatoho eBhobhoyi
IBUWOTHA ubomvu intsha yase Mngaka ngesikhathi ivala umgwaqo eBhobhoyi kuWard 20 ikhala ngokuthi ayinikwa amathuba okutohoza.
Lentsha ithe kunamaphrojekthi enziwayo kusona lesigceme afana nokwakhiwa kwedamu laseNtilivo kanye nomtholampilo kepha yona ishaywa ngesithende. Bathi ikhansela lendawo nalo alisho lutho kubona kodwa kuhlomula abantu bakwezinye izigceme.
Bathi futhi kunezindlu zemixhaso ezikhiwayo endaweni ezikhetha abantu.
Ikhansela lalesigceme uMnu. Sello Morafe uziphendulele wathi lephrojekthi yamapayiphi eyenziwa kulesigceme eyasoGwini okusho ukuthi eye-cluster.
“Njengoba leproject kungeyecluster, kuye kuthiwe kuqashwa abantu abane kuzona zonke isigceme ezakha leyocluster,” kusho uMorafe.
Uthe ngalokhe bakhona abantu abaqhashiwe kuWard20 futhi baningi uthi uyasola ukuthi umbango okhona owezigodi.
“Baningi abantu abaqasiwe ewadini yami ezigodini ezahlukene kanti futhi amanye amakhansela abenokungizwela athi akuthathwe abantu abathe xaxa kuWard 20.
ikhansela liyiphendulile neyezindlu zomxhaso lathi ngeke ufanise izindlu zomxhaso nama khekhe, ufake amakhekhe ayisithupha kuphumelele woyisithupha.
“Izindlu zemixhaso ziyakhiwa kuyimanje ukuthi akusheshi. Lomama owashelwa indlu naye ukhona ohlwini labantu abazokwakelwa izindlu,” kusho uMorafe.
Umphakathi usethembeni ngokushiwo uSomlomo uRonnie Nair kokuthi uzoqasha abantu abayishumi, ngesikhathi eyobheka isimo kulendawo.
Okhulumela umasipala uSimon April uthe zabakhona izingxoxo nababhikishi abaveza ukuthi bakhala ngomsebenzi. Emva kwakuzwiwa kwezikhalazo kwakhethwa ikomidi elizokhuluma nomuntu ophethe amaproject omphakathi.
“Kwaba ezinye sezivumelwano ezenziwa kwaba esokuthi kukhethwe abathathu abazokhuluma nomuntu omele amaproject omphakathi Community Project liaison officer nanokuthi kuzoqashwa abantu abayishumi. Emva kokuthi uSomlomo esenzile lesivumelwano isimo sombikisho sathi ukudamba nomphakathi wehlisa umoya” kusho uApril